စူပါမင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(cover date June 1938 / release date April 1938)
သာမန်လူသားတို့ထက်သာလွန်သော ခွန်အား၊ လျင်မြန်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း
x-ray ရောင်ခြည်ကဲ့သို့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော အမြင်အာရုံရှိခြင်း
စူပါမင်းသည် DC Comics မှဖြန့်ချိသည့် အမေရိကန်ရုပ်ပြကာတွန်းတွင် ပါဝင်သည့် ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်ကောင်ကို အိုဟိုင်းအိုးမြို့ Cleveland ရှိအထက်တန်းကျောင်းသားများဖြစ်ကြသော စာရေးဆရာ Jerry Siegel နှင့် အနုပညာရှင် Joe Shuster တို့မှ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် စူပါမင်းကို စုံထောက်ရုပ်ပြကာတွန်းသို့ ရောင်းချခဲ့သည်။ စူပါမင်းသည် ခရစ်ပတွန် Krypton. ဂြိုဟ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Kal-El ဟုခေါ်သည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ် (Earth) သို့မရောက်ခင် ခရစ်ပတွန်ဂြိုဟ်တွင် နေထိုင်သည်။ ထိုဂြိုဟ်ပျက်စီးခါနီးတွင် သိပ္ပံပညာရှင်ဖခင် Jor-El က စူပါမင်းမွေးစကလေးအား ဒုံးပျံထဲတွင်ထည့်လွှတ်လိုက်သည်။ Kansas ရှိ လယ်သမားလင်မယားက မွေးစားပြီး Clark Kent ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ကလေးဘဝကစ၍ ထူးခြားစွမ်းရည်များရှိခဲ့သည်။ ကလပ်-ကန့် သည် အမေရိကန်မြို့တော် "မယ်ထလိုပိုလစ်" တွင်နေထိုင်ပြီး၊ သူသည် "ဒေးလီး ပလန်းနက်" သတင်းစာတိုက်တွင် သတင်းထောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်။ သူ၏ ချစ်ခြင်းစိတ်ဝင်စား သူသည် သူနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်သူ သတင်းထောက် "လူးဝစ် လိန်း" ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ အဓိက ရန်သူသည် ပါရမီရှင်ထီထွင်သူ "လစ် လူသာ" ဖြစ်သည်။ စူပါမင်း သည် အမေရိကား နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်းကျေးမှုဆိုင်ရာ သငေ်္ကတ အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသည်။
၂.၁ ရုပ်ပြစာအုပ်များ နှင့် ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတိုများ
၃ အသိဉာဏ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တိုက်ပွဲများ
၄ စွမ်းရည် နှင့် အရည်အချင်းများ
၄.၄ Musical references, parodies, and homages
"The Reign of the Superman" from Siegel's Science Fiction #3 (January 1933).
ရုပ်ပြစာအုပ်များ နှင့် ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းတိုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
စူပါမင်း၏အသက်မှာ ရုပ်ပြကာတွန်းများထဲတွင် အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်။ ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့် ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။၁၉၇၀ ဝန်းကျင် နှင့် ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်က ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်များအရ သူ့အသက်မှာ ၂၉ နှစ်ဖြစ်မည်။ သို့သော် "The Death of Superman" ဇာတ်မ်းအရ Clark ၏အသက်မှာ ၃၄ နှစ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ထုတ် "Zero Hour" အရ သူ့အသက်မှာ ၃၅ နှစ်ဖြစ်သည်။
အက်ရှင် ရုပ်ပြ ၁၄၉ (အောက်တိုဘာ ၁၉၅၀) တွင် စူမပါမင်း မွေးနေ့ကို အောက်တိုဘာလဟု ဖော်ပြထားသည်။Clark Kent သည် သူ့မွေးနေ့ကို ဇွန် ၁၈ တွင်ကျင်းပသည်။ ပထမဆုံး Kent က Clark ကိုစတွေ့ခဲ့သည့် နေ့ဖြစ်သည်။ ဇွန် ၁၈ သည် စူပါမင်း အသံသရုပ်ဆောင် Bud Collye ၏မွေးနေ့လယ်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ထုတ် Crisis on Infinite Earths တွင် Kent ၏ မွေးနေ့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ဟုဖော်ပြထားည်။ စူပါမင်း:Secret Origin ၁ (နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉) တွင် Kent ၏မွေးနေ့ကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ဟုရေးထားသည်။
စွမ်းရည် နှင့် အရည်အချင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အစိမ်းရောင် ခရစ်ပတွန်နိုက်(kryptonite) သည် စူပါမင်း၏ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုက သူအားနောက်ဆုံးမှာ သေဆုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မှော်ပညာသည်လည်း စူပါမင်း၏ တခြားအားနည်းချက် ဖြစ်ပြီး သာမန်လူကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်း ဇာတ်လမ်းများတွင် စူပါမင်း ရင်ဆိုင်ရသည့် လူဆိုးများမှာ သာမန်လူများဖြစ်သည်။ လူဆိုးဂိုဏ်းများ၊ အကျင့်ပျက် နိုင်ငံရေးသမားများ နှင့် ဇနီးသည်ကို အကြမ်းဖက်တတ်သည့် ယောက်ျားများဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကြီးမားသည့် ရန်သူများပေါ်လာသည်။ ရူးသွပ်သိပ္ပံပညာရှင် Ultra-Humanite သည် Action Comics #13 (ဇွန် ၁၉၃၉) တွင်စပေါ်လာပြီး စူပါမင်း၏ ရန်သူအဖြစ် ထပ်တလဲလဲ ပေါ်လာသည်။ နာမည်အကြီးဆုံး ရန်သူတော်မှာ Lex Luthor ဖြစ်ပြီး Action Comics #23 (ဧပြီ ၁၉၄၀) တွင် စတင်ပါလာပြီး အဆင့်မြင့် လက်နက်များသုံးသည့် ဘီလျံနာသူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
Musical references, parodies, and homages[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Mike's Amazing World of Comics: Action Comics #1 (1938)
↑ Rhoades၊ Shirrel (2008)။ Comic Books: How the Industry Works။ Peter Lang။ p. 72။ ISBN 0820488925။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စူပါမင်း&oldid=721803" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။